Kheyre Oo Eedeyn La Xiriirta Geerida Jeneraal Galaal U Jeediyay MD Farmaajo – Great Banaadir
Kheyre Oo Eedeyn La Xiriirta Geerida Jeneraal Galaal U Jeediyay MD Farmaajo
Ra’iisul Wasaarihii Hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre hadana ah Musharax Madaxweyne ayaa maanta Muqdisho uga qeyb galay Gogosha Tacsida Alla ha u Naxariistee Jeneraal Maxamed Nuur Galaal.
Jeneraal Galaal ayaa kamid ahaa dadkii lagu dilay weerarkii ay 2 todobaad kahor ay Al-Shabaab ku qaadeen Hotel Afriik.
Khayre oo war ka soo saaray Tacsida uu ka qeyb galay ee Jeneraal-ka ayaa Allaah uga baryay inuu Naxariistii Janno ka waraabiyo, waxuuna dhammaan Ehelka, Qaraabada iyo guud ahaan Shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyeeyay geerida naxdinta leh ee ku timid Marxuum Maxamed Nuur Galaal oo ahaa “Astaan Qaran oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed u shaqeeyay cimrigiisa inta ugu badan.”
“Waxay aheyd in qaranku fidiyo gogoshaan, sababtoo ah qofka dhintay waxuu ahaa qof qaran, muhiimadda iyo ahmiyadda ugu weynna waxay tahay in ay dowladdu u abaal guddo, oo ay muujiso sida ay uga xanuunsaneyso dadka usoo dhintay ee astaanta u ah Qarannimada Soomaaliyeed,” ayuu Kheyre qoraalkiisa ku yiri.
Waxuu intaas ku daray, “Jeneral Galaal wuxuu kamid ahaa saraakiishii ugu aqoonta, tababarka iyo darajo sareysay ee hogaamin jirtay Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, ee lagu tilmaami jiray Libaaxyadii Afrika, wuxuuna sanadihii ugu danbeeyay ee noloshiisa ahaa odey waayo arag ah oo kaalin muuqato ku leh nabadeynta iyo dhab u heshiisiinta bulshada.”
Howlgalo Lagu Dilay Xubno Karirsanaa Al-Shabaab